Mpisoloky mpivarotra “mercure” : Olona telo no voasambaotra -
AccueilSongandinaMpisoloky mpivarotra “mercure” : Olona telo no voasambaotra
Tra-tehaky ny zandary tany Mahajanga, tamin’ny alalan’ny fampilazam-baovao avy amin’ny olona tsara sitrapo ny 26 jona lasa teo ireo telo mianadahy mpisoloky ho mpivarotra “mercure” tany an-toerana. Sarona niaraka tamin’izy ireo ihany koa ireo taratasy nofonosina vola iray alina ariary izay nanoloana ireo vola 08 tapitrisa ariary tena izy, tany amin’ilay niharan-doza. Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny zandarimariam-pirenena any an-toerana, dia olona avy aty Antananarivo no voan’ireto olon-dratsy avy any Maromandia Antsohihy ireto. Rehefa naheno mantsy ilay voasoloky fa misy “mercure” iray am-pahaefany amidy any Mahajanga, dia nanapan-kevitra ny hidina tany an-toerana sy nifanao tamin’ny tompon’entana ny tenany rehefa nahazo antoka ny fisian’io zavatra io ny 25 sy ny 26 jona lasa teo. Rehefa nigadona ny harivan’ny atalata lasa teo, dia nifanome fotoana teny amoron-dranomasina ny roa tonta hanaovana ny fifanankalozana ka tamin’izany no mody nilazan’ireo mpisoloky tamin’ilay olona avy eto Antananarivo fa tsy maintsy hanaovana fombafomba amina lavabato tsy lavitra ny toerana misy ny Baobab ny vola hividianana io “mercure” io vao azo izany.
Nandeha am-pahatokiana noho izany ilay niharan’ny asa ratsy ka nanome ireo vola mitentina 08 tapitrisa ariary nifanarahan’izy ireo hividianana”mercure”, izay entina ao amin’ilay lavabato hangalana ny entana . Minitra vitsy taorian’izay, dia niverina ireo roalahy sy vehivavy iray ka nomen’izy ireo an’ilay mpividy ilay voalaza fa entana nofonosina tamin’ny vola iray alina . Rehefa nosokafana anefa izany, dia hita fa namonosana azy teo ivelany fotsiny ireo vola ireo raha toa ka taratasy fotsy avokoa no tao anatiny. Tonga tany an-toerana moa ireo zandary vantany vao nahazo fampilazam-baovao avy amin’ny olona tsara sitrapo mahakasika ity tranga ity ka noraism-potsiny ireo olon-dratsy. Mbola mitohy kosa ny fikarohana ny naman’izy ireo roa hafa, izay voasaringotra ao anatin’ity raharaha ity. Ireo zandary ao amin’ity renivohim-paritany teo aloha ity moa dia nampitandrina ny rehetra mba ho mailo hatrany manoloana ny zava-nisy satria tsy kely lalana ny ratsy ary maro ihany koa no efa voasoloky tamin’ity resaka “mercure” ity na teto an-drenivohitra na tany amin’ireo faritra hafa. Omaly no natolotra ny fampanoavana tany an-toerana izy telo mianadahy ireo, ary nadoboka am-ponja vonjimaika avy hatrany taorian’izay.